Ny Samsung Gear Fit 2 Pro dia havoaka miaraka amin'ny Galaxy Note 8 | Androidsis
Ny Galaxy Note 8 no ho mpilalao fototra mandritra ny hetsika fanaovan-gazety Unpacked fa Samsung mikasa ny hihazona ny manaraka August 23 any New York, saingy misy tatitra vaovao navoaka tato amin'ny tranonkala vao haingana izay milaza fa hanatrika ihany koa ny orinasa Koreana Tatsimo smartwatch miorina amin'ny fitness vaovao mandritra io andro io ihany.
Ny Samsung Gear Fit 2 Pro dia ho fitaovana fanatanjahan-tena vaovao an'ny Samsung, ary hitantana ny rafitra fiasa Tizen OS izy io., fa hanana fanohanana ireo finday Android sy iOS ihany koa izy io.
Tonga aty aminay amin'ny alàlan'ny vavahadin-tranonkala ny tatitra vaovao VentureBeat ary avy amin'ny loharano anatiny lehibe indrindra, Evan Blass, izay nilaza fa nahazo sombina fampisehoana ho an'ny Gear Fit 2 Pro.
Toa ny akanjo fanatanjahan-tena fahatelo an'ny Samsung no ahitana a fanoherana ny rano hatramin'ny 5 ATM, ka hiasa milentika anaty rano izy io, ary mety ho izany tonga lafatra ho an'ny mpilomano izay maniry ny hanara-maso ny fandrosoany.
Raha ampitahaina, ny teo alohany, ny Gear Fit 2, IP68 ihany no voamarina, noho izany dia voaaro amin'ny fifandraisana indraindray amin'ny rano izy io, saingy tsy tokony hijanona anaty rano lava be izy io.
Blass koa dia nitatitra izany ny Gear Fit 2 Pro dia hanana GPS namboarina, fehin-tànana famantaranandro mahazatra ary fanohanana ny famerenana amin'ny laoniny ny mozika, ao anatin'izany ny fahaizana milalao ny làlan'ny Spotify tsy mila fifandraisana Internet.
Ary farany, dia toa misy ny fividianana ny Gear Fit 2 Pro a Famandrihana 1 taona amin'ny serivisy nomerika Premium de Under Armour.
Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra ny daty na ny vidin'ny Samsung Gear Fit 2 Pro, fa raha miaraka miaraka amin'ny Galaxy Note 8 izy io dia mety hamidy amin'ny volana septambra. Ny maodely teo aloha, Gear Fit 2, dia namidy tamin'ny vidiny 179 euro, saingy tsy ho gaga izahay mahita azy tonga amin'ny vidiny lafo kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Samsung Gear Fit 2 Pro dia havoaka miaraka amin'ny Galaxy Note 8